Umaki: ukuphathwa kwemibhalo | Martech Zone
Umaka: ukuphathwa kwemibhalo
NgoMgqibelo, Okthoba 10, 2020 NgoMgqibelo, Okthoba 10, 2020 Douglas Karr
Ukwenza ibhizinisi elizizwa lingenakho ukungqubuzana nekhasimende lapho imakethe ikhula ngobunzima akuyona into elula leyo. Ubungcweti beConga nesixazululo esibanzi sokusebenza kwezebhizinisi - izinqubo ezizungeze i-Configure Price Quote (CPQ), i-Customer Lifecycle Management (CLM), kanye ne-Digital Documents - zisiza amabhizinisi ukuthi abhekane nobunzima ngokuzethemba ukuze akwazi ukuhlinzeka ngesipiliyoni samakhasimende angenangxabano nokusheshisa imali engenayo. NgeConga, amabhizinisi ahamba ngokushesha ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende namuhla ngenkathi ekhulisa ubugagu
UMsombuluko, May 21, 2018 Douglas Karr
Njengoba ubheka ngaphakathi kwenhlangano yakho ukuthola amathuba, bavame ukuhanjiswa kolwazi. Kusukela ekumaketheni kuya ekuthengiseni, ukuthengisa kumakhasimende, amaklayenti abuyele ekuthengisweni, bese ukuthengisa kubuyela ekumaketheni. Ezweni ledijithali, konke lokhu ukukopisha idatha, ukuhlela nokunamathisela akunasidingo nakancane. Amathempulethi angakhiwa ngayo yonke inqubo nakuwo wonke amaqembu ukuqinisekisa ukuhambisana, ukuvumelana komkhiqizo, kanye nemibhalo esezingeni eliphakeme isatshalaliswa. I-Templafy isetshenziswa yimikhiqizo
I-ContentVerse: Ukuphathwa Kwemibhalo kanye ne-Automation Workflow
Iningi lomhlaba wezinkampani lisasebenzisa futhi lithumele okuqukethwe kwabo ngamapulatifomu e-Microsoft Office. Uma ufuna ukugcina ukulawulwa kwenguqulo yamadokhumenti akho futhi wenze ukuhamba komsebenzi kusebenze, cishe akunakwenzeka ngaphandle kwethuluzi elihle lokuzenzakalela kokuhamba komsebenzi kanye nendawo yokugcina amadokhumende yokugcina inguqulo ngenkathi usebenzisana. Ama-ejensi wokumaketha - ikakhulukazi ngamasu wokumaketha okuqukethwe - akhiqiza ithoni yalokhu okuqukethwe kuzinhlelo zokusebenza zendabuko zedeskithophu. Futhi ukuseshwa kohlelo lokusebenza akuyona indlela elula ngaso sonke isikhathi